Xildhibaano ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya oo maanta ka dhoofay Kismaayo – SBC
Xildhibaano ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya oo maanta ka dhoofay Kismaayo
Posted by Webmaster on April 6, 2013 Comments
Waxa dib uga laabtay Magaalada Kismaayo xildhibaano ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya oo Maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ku sugnaa .
Xildhibaanada Maanta ka amba baxay Magaalada Kismaayo waxa ay u kici timeen dhanka Magaalada Muqdisho xarunta dalka waxaana kismaayo ay u joogeen taageero ay u hayaan shirka u socda maamul u sameynta Jubaland iyo u kala dabqaadida khilaafka ka dhexeeya dowlada Soomaaliya iyo maamulka Kismayo.
Waxay kismaayo kula kulmeen intii ay ku sugnaayeen dhinacyo kala duwan oo uu ka mid yahay maamulka Magaalada ee Kumeelgaarka ah iyagoo kala hadlay arimo dan u ah maamulka iyo shirka ka socda Kismaayo.
inkastoo ana faah faahin buuxda laga heyn halka uu ku dambeeyay howsha u kala dabqaadida ee ay dhinac ka wadeen xildhibaanadan ayaa hadana waxa ay sheegen qaarkood saxaafada la hadlay in muqdisho ay kula laaban doonaan waxyaabihii ay kala kulmeen Kismaayo.
Magaalada Kismaayo Xarunta gobolka Jubada hoose waxaana ka socda shirweynaha Maamul loogu sameynayo gobolada Jubaland waxaana la soo tabinayaa in uu marayo meel wanaagsan.